Photo Mhariri Mapurogiramu ema Smartphones
Iwe unofanirwa here kugadzirisa mifananidzo yehunyanzvi webhusaiti, asi iwe usina yakawanda yehunyanzvi hunyanzvi? Usazvidya moyo. Kune akawanda zvirongwa kunze uko anogona kuita basa racho futi, kana zvisiri nani pane iwo aunobhadhara mari yakanaka. Sei uchibhadhara mazana emadhora kune chimwe chinhu chakangofanana nekutenga icho chitsva? Uye zvakare, mazhinji emapurogiramu aya mahara kana ane yakaderera mutengo vhezheni isingazodya bhajeti rako rese.
Zvishandiso zvepamhepo zvakanaka kune chero munhu anotarisa kugadzirisa mapikicha nekukurumidza uye nyore. A inozivikanwa pamhepo pikicha mupepeti iAdobe Photoshop, iyo inowanikwa yemahara online. Iine nyore kushandisa interface, kunyangwe mumwe munhu asiri nyanzvi anogona kuita shanduko uye chengetedza mafoto nekukurumidza. Kana iwe uchinge uchinge uine raibhurari yemifananidzo pakombuta yako, unogona kuendesa mifananidzo yako muFotohop kuburikidza neyakavakirwa mune yekuisa chinhu.
Kumwe kwekukanganisa kukuru kunoitwa nevanhu vazhinji kuchengetedza mapikicha avo vasina kuagadzirisa zvachose. Ndeipi poindi yekuwedzera mapikicha kana asiri kuzogadziriswa? Kune akawanda emahara epamhepo stock mapikicha edhita ayo anotendera iwe kuti uchengetedze ako mafoto pasina kunetseka nezvekucheka kana kubvisa maziso matsvuku, kushandura mavara, kana kuita chero chero shanduko ingango shandura iyo mufananidzo zvakanyanya. Mazhinji emasaiti aya zvakare anoita kuti iwe ugadzirise ako mapikicha ipapo ipapo uye ipapo, pasina kumbobvira warodha pasi app. Iwe unogona kuita zvese ipapo ipapo uye ipapo pasina kumirira iyo yekuodha maitiro.
Kana iwe uri kutsvaga kugadzirisa pikicha, asi iwe usingazive maitiro ekuzviita, yakanaka pikicha mupepeti ndiyo mhinduro kwayo. Mazhinji maapplication anozivikanwa anowanikwa mahara pamhepo, uye ari nyore kushandisa. Imwe yeanonyanya kufarirwa neaya Instagrammer instagrammer. Iine vanopfuura mamirioni mazana maviri nemakumi mashanu evashandisi, iyi yemagariro media chikuva chakanakira kutora nekugadzirisa mifananidzo. Kwete izvozvo chete, asi mupepeti uyu wemifananidzo anokutendera kuti ugadzire hunyanzvi, ugovagovana neshamwari, kudhirowa hunyanzvi, uye kushandisa mavara uye mamiriro. Muchidimbu, iyi ndiyo nzira yakanaka yekugovana rako basa online.
Imwe yeakanakisa emahara epamhepo edhiza edhita ndeye Kodak EASYSHAREpic. Iyi intuitive chirongwa inokutendera iwe kuti uchinje ruvara uye kusimba nekungodhonza uye kudonhedza sarudzo kubva pane pop up menyu. Izvo chete zvinowira pasi ndezvekuti maratidziro ayo anogona kunge achivhiringidza, kunyanya kune vanotanga. Nekudaro, kana iwe uchinge wawana iko kusungirirwa kwacho, iyi intuitive yekugadzirisa chirongwa zvirokwazvo ndiyo imwe yeakanakisa.
FotoFotor ndomumwe wevatsva vemifananidzo vapepeti vanobuda kunze kwecampoamor, Spain. FotoFotor inopa akawanda akajairwa emifananidzo ekugadzirisa maficha pamwe neyemberi foto mhedzisiro senge matte, makakombama, kupukuta, uye zvakaipa. Iwe unogona kutowedzera mameseji kumafoto ako uchishandisa yavo chinyorwa chinyorwa. Kana iwe uchida kusanganisa mifananidzo kana kugadzirisa mufananidzo, FotoFotor inopa Rectify chishandiso uye Paintbrush. Yepamberi firita maficha anosanganisira Auto Kuratidzira, Ruvara Kururamisa, Grainy Nhema Gradient Kubvisa, Ruvara Mhedzisiro, uye otomatiki Red Ziso kudzikisira. Kana iwe uchitsvaga nzira yekuita yekare foto kutaridzika kutsva zvakare, ipapo FotoFotor inogona kunge iri mhinduro yauri kutsvaga.
Imwe yemufananidzo mhariri app yakakodzera kuongorora ndeye Picasa Snap. Picasa Snap yakanyanya kuve yehunyanzvi pikicha mhariri pane yemagariro midhiya post muiti. Nemazana ezvishandiso zvemberi uye maficha, Picasa Snap inonunura zvese zvaunoda kushandura ako mapfumo mune epamusoro-kumagumo akanakisa zvidimbu zvehunyanzvi. Uine Picasa Snap, unogona kugadzira kudhirowa kwehunyanzvi uye kugadzirisa zviri nyore uchigadzirisa kumanikidza uye kushandisa bandwidth muInternet yako. Nekuda kweizvozvo, iwe unogona kugovana mabasa ako neshamwari, vaunoshanda navo, uye mhuri pasirese pasingatarisane nezvinetso zvekumanikidza zvemifananidzo.
Iyo Android Musika parizvino izere nenhamba dzakasiyana dzakasiyana foto kolaji yekugadzira maapp. Nekudaro, vashoma chete vavo vanopa maficha anosangana nezvinodiwa zveanhasi ekugadzira maartist. Semuenzaniso, mazhinji eaya maapplication akagadzirirwa nyanzvi dzekutora mifananidzo uye haazoise maficha senge retouching, kugadzirisa, kurima, kana masiki. Kana iwe uchitsvaga iyo yemufananidzo collage inogadzira ine akati wandei maficha, saka iwe unofanirwa kusarudza Stencils yeApple.